Somaliland Oo Xubin Ka Noqotay Wadamadda Ku Midoobay Ka Hortaga Xannuunadda Faafa | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Somaliland Oo Xubin Ka Noqotay Wadamadda Ku Midoobay Ka Hortaga Xannuunadda Faafa
Hargaysa (SDWO): Madaxweyne-ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil (Saylici), ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wefti ballaadhan oo ka socda qaar kamida dalalka afrika ee ku bahoobay urur ka hor tagga xanuunada faafa oo uu hoggaaminaayey Dr.Simon Antera.
Waxaana ay wafdigu madaxweyne ku-xigeenka u sheegeen in Somaliland loo aqoonsaday inay xubin ka noqoto 31 waddan oo ku midoobay la dagaalanka xanuunada faafa, taasi oo ay jamhuuriyadda Somaliland qayb ka noqotay isla maanta.
Wasiirka Caafimaadka Somaliland Dr. Xasan Ismaaciil Yuusuf, ayaa ku dheeraaday dadaalka ay ka wasaarad ahaan ugu jiraan sidii ay Somaliland qayb uga noqon lahayd inta badan waddamada iska kaashada horumarinta caafimaadka.
Madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Somaliland ayaa wafdigani iyo dalalka ay ka socdeen ee Afrika uga mahad celiyay garashadooda ah inay Somaliland ku daraan 31 dawladood ee ku midoobay ka hor-tagga iyo la-dagaalanaka xanuunada faafa oo bulshada Afrika fara-baas ku haya.
Waxaanu madaxweyne ku xigeenku sheegay in Somaliland uga baahantahay Afrika gacan weyn oo ay ku garab istaagayaan qaddiyadda kamid ahaanshaha dunida ee Somaliland.
Weftiga ayaa ballan qaaday inay dalalkooda iyo kuwa Afrika ee kaleba ay ka dhaadhicin doonaan waxa ay Somaliland ku soo arkeen oo ay ugu horrayso nabad-galyada iyo dawladd wanaaga.